Finland | November 2019
Dadka Finnishka ah waxay abuurayeen budo borotiin ah oo ka sameysan gooryaanka iyo guluubka.
Editor Ee Doorashada November 15,2019
Ugu Weyn Ee Finland
Xarunta Cilmi-baarista farsamooyinka ee Finland ayaa soo saartay tiknoolajiyad udubdhexaad ah iyo gooryaanka cuntada oo loo rogo waxyaabo cunto ah kuwaas oo loo isticmaali karo inay ku sameeyaan kalluun ama falafel, tusaale ahaan. Iyadoo loo eegayo dhadhanka kala duwan, qaab dhismeedka (iyadoo ku xiran qashin-qaadashada), budada waxay noqon kartaa qayb ka mid ah cuntooyinka badan ee cuntooyinka.
Maxay ciyaalka cunaan beerta iyo xagaaga xagaaga, kaynta dhexdeeda iyo cawska
Kodiya Motley: noocyo, talooyin ku saabsan daryeelka guriga
Dabocase sonkorta: wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato oo ku saabsan beerashadooda
Dhibaato joogto ah leh sumcad fiican - yaanyo "Bourgeois": sharaxaadda kala duwan, sawir
Bacriminta "Akvarin": sharaxaad, codsi, halbeeg, barid
Asalka aspidistra wuxuu qurxiyaa gees kasta oo gurigaaga ka mid ah. Daryeelka this qurux badan oo cagaaran madow cagaaran waa mid aad u fudud in xitaa korriin awrka ku qaban karto. Xaaladaha ugu wanaagsan ee kordhaya aspidistra Dhirta waa ballaaran (qiyaas ahaan 15 cm), oo la mid ah qaabka xiddig. Aspidistra si aad u yar, iyo haddii ay ku siinaysaa ubax casaan jilicsan, ka fikir naftaada nasiib. Read More
Cimilada xiddig: sharaxaadda iyo qaababka codsiga
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Finland 2019